Incoko yevidiyo yesiNgesi
Incoko yevidiyo yesiNgesi.
Namhlanje abantu abaninzi bayazi malunga nethuba lokuncokola ngevidiyo roulette yaseRussia. Nabantu abaninzi bazama ukufikelela kuloovimba okungenani kube kanye ngemini ukuze bancokole ngokukhululekileyo nabanye abantu: bevela kwezinye izixeko, amazwe nakwilizwekazi. Ingxoxo yeVidiyo Russian roulette ilungele kuba wonke umntu uthetha ikakhulu isiRashiya kwesi sibonelelo. Ngaphandle koko, akukho zithintelo.
Kutshanje, ividiyo yencoko yevidiyo yaseRussia iye yanda ngakumbi. Ke lixesha lokuba uthethe nge-etiquette kwincoko yevidiyo yaseRussia. Lo mbuzo ukhathaza iiznizens ezininzi. Eli nqaku liza kuqwalasela le micimbi ilandelayo:
i-etiquette kwincoko yevidiyo "roulette yaseRussia"
kutheni ufuna ukulandela i-etiquette kwincoko yevidiyo
ze-etiquette kwincoko yevidiyo yaseRussia
imigaqo esisiseko yokuziphatha kwindlela yokuxoxa ngevidiyo Roulette
indlela yokuba ngumguquki omkhulu kwincoko yevidiyo ye-Russian roulette
A ngoku masihambe ngokufutshane kuwo onke amanqaku e-etiquette kwincoko yevidiyo yaseRussia. Masiqale ngombuzo wokuqala:
Yintoni i-etiquette kwincoko yevidiyo yaseRussia?
Wonke umntu uyazi ukuba i-etiquette ngumgaqo wokuziphatha kwiimeko ezithile nakwiindawo ezithile. Kuya kuba njalo nakwi-Intanethi. I-Etiquette kwi-Intanethi nakwiincoko zevidiyo yimithetho yokuziphatha, inkangeleko, isimilo, kodwa sele ikwi-Intanethi. I-etiquette ye-Intanethi ayihlukile kakhulu kwi-etiquette elula. Kodwa kusekho umahluko. Yiloo nto esiza kuthetha ngayo xa kuxoxwa nge-etiquette kwincoko yevidiyo yaseRussia. Abantu abaninzi ngakumbi bafuna ukwenza abahlobo abatsha, okanye nabahlobo, kwi-Intanethi. Iincoko zevidiyo zilungele kakhulu oku.
Namhlanje, wonke umntu unokuya kuyo nayiphi na incoko yevidiyo kwaye afumane umntu oza kuthetha naye. Ividiyo roulette yengxoxo yahlukile kwincoko elula yevidiyo kwezinye izinto:
interlocutor inikezwe ngokungacwangciswanga
Ungaphazamisa incoko nangaliphi na ixesha kwaye uqalise ukuncokola nabanye abantu.
ayidingi kubhalisa ukuqala incoko
Ungathetha nabantu abaliqela kwiseshoni enye.
Zezi mpawu ezichaza imigaqo yokuziphatha ngexesha lonxibelelwano kwividiyo yengxoxo yevidiyo. Ngokukodwa kwincoko yevidiyo Russian roulette. Imigaqo yokuziphatha ngexesha lokuncokola kwi-intanethi ilula kwaye iyaqondakala kuye wonke umntu. Nangona kunjalo, kufanelekile ukwazi ngabo ngaphandle kokusilela. Kwaye ngokukhawuleza ufunda le mithetho, kokukhona iya kuhlaziyeka kwaye imnandi incoko kunye nabanye abangeneleli iya kuba. Izibonelelo ezingaphezulu uya kuba nazo njengomngeneleli.Oku kunokuba sisalathiso sokuziphatha kakubi. Kwaye, ngokuchaseneyo, ukuba imigaqo yokuziphatha kunenethiwekhi kwividiyo yengxoxo yaseRussia iyahlonitshwa, ke abo bangenelela ngolonwabo bayanxibelelana kwaye baphakamise ukuba bajonge iintlanganiso ezikwi-Intanethi nawe. Le yinyaniso elula: ukuba uyayibona indlela yokuziphatha, ngoko unxibelelwano luya kuzisa ulonwabo olukhulu kwinkqubo ngokwayo. Kwaye umntu ithandwa ngabantu njengongeneleli uya kuba nakho ukwenza abahlobo abatsha okanye abantu obaqhelileyo. Okanye nincokole nje kumnandi. I-
Ukuba ubona i-etiquette kwividiyo yencoko yevidiyo, unokufumana lula izibonelelo ezininzi ezivela kwabanye abangeneleli. Kwaye kuyenzeka ukuba ucofe ngaphandle kwabagqatswa abangafanelekanga ukunxibelelana ngexesha elifutshane. Akuyonto imfihlo ukuba iimodareyitha zitshekishe izikhalazo kwaye zibathintele ngexesha, okanye nabantu abalungileyo abangaziphathanga ngokwemigaqo. Ukuba awuyilibali i-etiquette eyamkelweyo kwincoko yevidiyo yengxoxo, banokubhala isikhalazo ngakuwe kwaye kule meko kuya kubakho amathuba aphezulu okuvalwa umlomo okwethutyana. Ukuba izikhalazo zifunyanwa rhoqo, ke ngoko ukubakho kwesibhengezo kuya kubonakala ngonaphakade.
Esi inokuba sesinye sezizathu eziphambili kunye neempendulo kumbuzo: kutheni le vidiyo yevidiyo kufuneka ibukele ubumnandi?
Le, ewe, impendulo, kodwa ayisiyiyo yodwa. Ukongeza kwisibhengezo esinokubakho, kukho ezinye izinto ezingalunganga ukuba inkcubeko yokuziphatha ayihlonitshwanga. Umzekelo, imeko inokuvela xa umthanda ngokwenyani umntu othetha naye kwaye ungathanda ukuqhubeka nokuthetha naye, kodwa ungazi ukuba uyenza njani le nto. Oku kuyakuba sisakhi sentetho. Yonke intsingiselo yimithetho yonxibelelwano. Kwaye ukwazi indlela yokongeza igumbi ngalinye lonxibelelwano nako kunokuba yinxalenye yendlela yokuziphatha.
Ukuba umnxibelelanisi uneentloni kwaye athule ixesha elide, ke uya kwaphula nemithetho yokuziphatha. Emva kwayo yonke loo nto, unxibelelwano lubandakanya izinto ezenziwa kunye. Ke ngoko, kuya kuba ngummangaliso ukuba omnye uya kuthetha lonke ixesha, kwaye omnye uya kuhlala ethe cwaka.
Kukugcinwa kwe-etiquette eyenza iRoulette yevidiyo yokuncokola ibe mnandi kwaye iluncedo. I-
Iindidi ze-etiquette kwincoko yevidiyo yaseRussia.
I-Etiquette ingahluka. Ubuninzi be-etiquette bunokwahlulwa bube yi:
Ezi ntlobo ze-etiquette inokuqwalaselwa njengeyona nto ibaluleke kakhulu xa unxibelelwano kwividiyo yengxoxo yaseRussia. Makhe sijonge kwaye sihlalutye ngokweenkcukacha uhlobo ngalunye lwendlela yokuziphatha.
Ukutya iimpahla zokunxiba kuthetha ukuba ufanele unxibe ngexesha leseshini yencoko ye-intanethi. Ubuncinci ngenjongo yokuhlonipha umngeneleli wakhe. Amantombazana kunye nabasetyhini akufuneki babonakalise amabele ahamba ze kunye namanye amalungu emizimba yabo aya kuba ngathi aya ngesondo nangayiphi na indlela.
Indoda nayo ilungile ukuba inxibe.Oku kuthetha ukuba bobabini abangeneleli mabanxibe ngelixa bencokola ngeRoulette yaseRussia.
Ukuba sithetha nge-etiquette yokwenza izimvo, ke yonke into ilula. Ukuba ufaka i-Makeup ekhanyayo kakhulu, inokugxotha ngoko nangoko umhambisi onokubakho. Okanye unokutsala. Awusoze wazi ngokuqinisekileyo. Ke, amantombazana kungcono ukugxila kwiimvakalelo zabo. Ukuba ukhululekile kwi-makeup ekhanyayo, ungayenza. Ukuba ukhululekile ngaphandle kokwenza i-makeup, ke awukwazi kuyenza konke konke.
Kodwa kufanelekile ukukhumbula ukuba "badibene ngeengubo, kodwa bephelekwa yingqondo." Imizuzwana yokuqala yeyona ibaluleke kakhulu xa ujonge umgibeli. Kwaye kwimizuzwana yokuqala uhlolwe ngokuchanekileyo kwinkangeleko. Ke, cinga ngononophelo malunga nento oza kuyinxiba kunye nendlela oza kuyinxiba ngayo. Kwaye ungakulibali malunga neenwele. Ubuncinci bokulwa abuphazamisi.
Ukuba uqaphela ezi ntlobo zokuziphatha: inhlonipho yokuziphatha, indlela yokuziphatha kunye nokupeyinta, ngokuqinisekileyo ukuncokola kwincoko yevidiyo yevidiyo ngokuqinisekileyo kuya kuthwala isiqhamo: uya kufumana abathengisi abanomdla kwaye unxibelelwano luya kungalibaleki. I-
Imigaqo esisiseko yevidiyo yokuncokola i-roulette yaseRussia.
Bantu baya kwiincoko zevidiyo ukuze nje bathethe kwaye baphumle kancinci emva komsebenzi onzima wosuku. Kwincoko enye yevidiyo, i-roulette yaseRussia inokudibana nabantu abavela kumazwe ahlukeneyo, izixeko, inqanaba lentlalontle eyahlukileyo kunye nenqanaba lokufumana umvuzo. Konke oku kunye kukuvumela ukuba uthethe ngokukhululekileyo kwaye kwangaxeshanye ufumane iimvakalelo ezininzi ezimnandi.
Kuyinyani, konke oku kunokwenzeka kuphela ngokuxhomekeke kwimithetho engqongqo yokuziphatha kwindlela yokuxoxa ngevidiyo. Imigaqo yokuziphatha ikwabandakanyiwe nakwi-etiquette. Ukuqwalaselwa kwabo kuya kuthetha ukuba ungumntu oncumisayo wokuthetha ozihlonelayo iimvakalelo zakhe kunye nembeko kwiqabane lakhe.
Kwaye ngoku makhe sijonge yonke imigaqo yonxibelelwano ngokwemigaqo yokuziphatha.
Nantsi imigaqo esisiseko yokunxibelelana kwividiyo yengxoxo yaseRussia roulette:
Hlonipha imvakalelo yomnxibelelanisi
Zihlonele kunye neemvakalelo zakho.
khetha i-interlocutor yemidla
iyeke unxibelelwano olungafunekiyo nolunobungozi
Le yimithetho, ukuba ibonakalisiwe ngolwimi lwenhlonipho. Ngoku makhe sijonge imigaqo efanayo ngokwemigaqo yengxoxo yevidiyo yaseRussia. Nantso into abayithethayo:
Awungekhe ube krwada kwaye usebenzise amazwi afungayo
awukwazi ukuthuka umntu nangasiphi na isizathu: isini, ubudala, ibala lolusu, iinkolelo zenkolo, umbono wezopolitiko. I-
awukwazi ukusebenzisa isini kunxibelelwano
awunakubonakala kwisakhelo uze
Awunakho ukubonisa ezinye izinto endaweni yakho kunye nobuso bakho.
Le yimithetho esisiseko. Ukuba ziqwalaselwe ngqongqo, unxibelelwano, ndiyaphinda kwakhona, luya kuzisa iziphumo ezilungileyo kuphela.Iimodareyitha zevidiyo yokuxoxa yaseRussia ichitha imini nobusuku, ihlela ngezikhalazo. Kwaye ngokufuthi ezo ndwendwe zingxoxo zeVidiyo zRussia zencoko eziphula umthetho ubuncinci. Kuyinyani, azithinteli ngonaphakade, kodwa lixesha elithile. Kodwa ukuba okungalunganga kukhulu okanye kunzulu kakhulu, ke banokuvinjwa ngonaphakade. Oku kuya kuthetha ukuba unokuphulukana nethuba lokuncokola i-roulette yaseRussia ngobudenge bakho.
Ke, kubaluleke kakhulu ukulandela imigaqo yokunxibelelana kwincoko yevidiyo yaseRussia.
Ukuba sisihlandlo sakho sokuqala ukuncokola iRoulette yaseRussia, ungaqala incoko eqhelekileyo malunga nayo yonke into esemhlabeni.
Abanye iindwendwe kunzima kakhulu ukuzula apho. Abantu abanjalo bahlala belahlekile kwaye abazi ukuba baqhubeke njani nencoko, ukuba umnxibelelanisi uthe cwaka kwaye akaphindi azame ukuqhubeka nencoko.
Zimbini izinto onokukhetha kuzo apha:
Wena njengomnxibelelanisi osebenzayo ubuza imibuzo ekhokelayo okanye ucebisa ngesihloko ukuze kuxoxwe.
umane ucima lo mntu ukhangela omnye
Ngethamsanqa, kwividiyo yokuncokola i-roulette yaseRussia kukho iwaka kunye neendlela zokukhangela i-interlocutor entsha. Ngokomgaqo, indawo yevidiyo incokola roulette yaseRussia kwaye isekwe kukhangelo olungalawulekiyo kwiqabane lonxibelelwano. I-
Ungaba njani i-Russia Roulette Interlocutor epholileyo.
Mninzi, abasebenzisi abaninzi beRussia yencoko yevidiyo bayabuza lo mbuzo. Ewe, ngamaphupha phantse wonke umntu uzibona ephumelela. Ukuphumelela kwincoko yevidiyo, kuthetha ukuba umfana onobuhlobo, osebenzayo, ozithembileyo. Kodwa yintoni omele uyenze ukuba awungonwabi kwaye unqabiseke ngokupheleleyo?
La manyathelo alandelayo anokunceda:
Cinga ngaphambi kokuba uthethe ngento oza kuyithetha nomnye umntu.
Cinga ngendlela yokuqalisa incoko. Eyona ixhaphakileyo ithi "Molo! Unjani?" Kwaye ungacingi ukuba eli ibinzana elikhethiweyo kwiinkulungwane. Akunjalo kwaphela. Ukuba uthi ngentlonelo kwaye nge-
ibinzana ebusweni beli binzana, emva koko 85% yencoko iya kuqhubeka. I-
nxiba ngendlela othanda ngayo. Oku akuthethi ukuba unganxiba ibhulukhwe yakho kwaye ungazihluphi ngenye indlela. I-Nakso torso isenokuphoswa ngabaninzi ngento evusa inkanuko nokuba ingakhange iqalise incoko. Kodwa i-T-shirt kunye ne-jean ziya kubangela uvelwano kwaye kuya kubakho ithuba lokuqhubeka nencoko. Ewe, isuti engqongqo kwincoko yevidiyo ayisebenzi. I-
ingcono ukudibanisa iinwele zakho. Ngubani ofuna ukuthetha nomntu we-shaggy? I-
uncumo. Tshomi, kodwa ungahleki. Kungenjalo, banokucinga ukuba uyamhleka lomntu uthetha naye. Kwaye oku kunokubangela umnqweno wokucofa iqhosha "elilandelayo". I-
Kwaye ngokubanzi, khumbula ukuba yonke into kwincoko yevidiyo ingabantu abaqhelekileyo, ngamabali abo kunye nokuvela. Kwaye abantu abaninzi banokunxibelelana okokuqala nje.Kungakufanelekela oko nokuba uvume ukuba ulapha okokuqala.
Masikhumbule kwakhona into onokuyiphepha xa uncokola ngeRoulette yaseRussia:
I-97,007 amalungu omzimba ahamba ze
Ukubonakala kwisakhelo endaweni yobuso bezinye izinto
Kwaye masikhumbule ukuba yintoni ekufuneka ibe kuyo kwinkqubo yokunxibelelana kwincoko yevidiyo yaseRussia:
I-97,007 iimvakalelo ezakhayo
Imvume yokuvumelana kunye ukuqhubeka ngxoxo
Ukuba kwenzeka ngequbuliso ukuba uye kwincoko yevidiyo yaseRussia, kodwa watshintshwa amatyeli aliqela ngokulandelelana, ungalahli ithemba. Kusenokwenzeka ukuba abantu bajonge abanye abantu ukuba bathethe nabo. Ungalahleki kwaye uqhubeke ngokukhangela kwi-interlocutor yakho. Ngaphantsi kwemizuzu emihlanu, uya kufunyanwa. Kwaye incoko emnandi kwaye emnandi iya kuqala. I-